1 comments at 1:25 AM
ဒီဆောင်းပါးကိုတော့ ယမကာလုလင်လေးများ၊ယမကာလုလင်ကြီးများ၊ အရက်သမားပျိုလေးများနဲ့ အရက်သည်သာအမိ၊အရက်သည်သာအဖများပါမကျန်၊ အရက်နှင့် သင့်ကျန်းမာရေး သင်ကြိုက်ရာရွေး ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ရှေ့မှာ ဘယ်နှစ်လုံးရမှာလဲမေးနေသူတွေနဲ့အတူ၊ မသောက်ရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့တွေကိုလည်းချန်မထားစေဘဲ၊ အရက်မရှိသော ကမ္ဘာမှာလူမဖြစ်ရပါစေနဲ့ဆိုပြီး ဆုကြီးပန်သထားသူတွေကို အတိအကျရည်ညွှန်းပြီးရေးပါတယ်။
တစ်ခါက နီကိုရဲပြောဖူးတယ်။ ဘုရားကို နင်းသတ်ဖို့ နာဠာဂီရိ ဆင်ကြီးကို ၈ အိုးအစား ၊ ၁၆ အိုးတိုက်လိုက်တဲ့အထဲက တစ်ဝက်လောက်သူတို့ကူသောက်ပေးလိုက်ရင် ဆင်ကြီးလည်း အကုသိုလ်မဖြစ် သူတို့တွေလည်း ရေချိန်ကိုက်သွားမယ်ဆိုလား။ သူတို့တွေလဲ သွားရှာပါပြီ။ ဆင်မိုက်ကြီးကို ဖြစ်လေရာဘ၀မှာများ ကူသောက်နေပြီလားမပြောတတ်ဘူး။
အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ ကောင်းလားမကောင်းလားတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ အလွန်အကျွံမဖြစ်ဖို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလောက်သောက်တတ်ဖို့ကြိုးစားပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ရင်လျော့သောက်တာစေချင်ပါတယ်။
အရက်နာကျခြင်း ညဘက် အရက်သောက်ပြီး နောက်မှာ အရက်သမားဟာ (ယမကာလုလင်ဆိုတာလည်းသူ၊ သေရည်သောက်စားသူဆိုတာလဲသူပဲ၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အယ်လ်ကိုဟောလစ်ဆိုတာလည်းသူပဲ၊ အသောက်သမားဆိုတာလည်းသူပဲ) ကောင်းကောင်းအိပ်လို့မပျော်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပြန်လျှော့ချဖို့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မပျော်ဘူး။ ဆိုလိုတာက အိပ်ပျော်တာတော့ အိပ်ပျော်မယ်။ လန်းလန်းဆန်းဆန်းပြန်ထနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အရက်သောက်ရင် အရက်ဟာ ဂလူတမင်း ကို အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်အောင်နှောက်ယှက်တယ်။ အရက်သောက်တဲ့သူကမမူးသေးဘူး။ အယ်လ်ကိုဟောက မူးပြီး ဂလူတမင်းကို ရစ်နေပြီ။ ဂလူတမင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းဆိုတာ အိပ်မငိုက်အောင်၊ လူက လန်းဆန်းနေအောင် လုပ်ပေးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပေါ့။ အဲဒီလို သဘာဝမှာ သဘာဝကျကျဖြစ်နေတဲ့ ဂလူတမင်းကို သွားနှောက်ယှက်တဲ့အတွက် အရက်မသောက်တော့ဘဲ ရပ်လိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ဂလူတမင်းပိုပြီးလိုနေတဲ့အတွက် အတိုးချပြီး ထုတ်လုပ်တယ်။ အယ်လ်ကိုဟော ပိတ်ထားလို့ လာမရတဲ့ဂလူတမင်း ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို အတိုးချဆောင်ရွက်တယ်။အဲဒီလို ဦးနှောက်မှာ ဂလူတမင်းတွေ သိပ်များနေတဲ့အခါ ဂလူတမင်းဟာ လှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက် အရက်သောက်ထားတဲ့သူက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပျော်အောင် အိပ်လို့မရတော့ဘူး။ အခုနက သူ့ကို တားထားတဲ့ အယ်လ်ကိုဟောကို လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းအိပ်မရအောင် လက်တုံ့ပြန်သလိုပေါ့။ အဲဒါကြောင့် နောက်တစ်နေ့ကြရင် ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲနာကျင်နေတဲ့ အရက်နာကျတာဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်မှ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေက ဆဲလ်အသေတွေကို လဲလှယ်တာ၊ လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေလုပ်တာတွေကို လုပ်နိုင်တယ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မပျော်ရင် အဲဒါတွေမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူး။ F1 မှာ ကားဘီးလဲပေးလိုက်ပြီး မူလီပြန်မကြပ်ပေးလိုက်မိသလို … ဖြစ်သလို လွှတ်လိုက်တာမျိုး။ အချိန်မရလို့ လုပ်မပေးလိုက်ဘူး။ အရက်နာကျတယ်ဆိုတာလည်း အမှန်က အဲဒီ ဂလူတမင်းတွေများနေတာကို နည်းအောင် ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်ချိန်ပေးတာပါပဲ။ ပြင်းထန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာဆိုရင် လက်တွေတုန်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာ၊ဂနာမငြိမ်တာ၊ သွေးတိုးတာတွေဖြစ်မယ်။ဒါတွေက ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ အရက်ကို အစာအိမ်က စုတ်ယူထားတဲ့အတွက် အစာအိမ်က ဆဲလ်တွေက အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။ အယ်လ်ကိုဟောဟာ အစာအိမ်ထဲက ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ် အက်ဆစ်တိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်။။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက် အစာအိမ်ကနေ ဦးနှောက်ကိုသတင်းပို့ရတယ်။ အစာအိမ်ထဲက အရာတွေက နာကျင်နေပြီ။ မြန်မြန်အန်ထုတ်ပါဆိုတဲ့ သတင်းကို ဦးနှောက်ကိုပို့တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်အန်တယ်။ အန်လိုက်ရင် အရက်နာကျတာ သက်သာမယ်။ အစာအိမ်ထဲက အရက်ရော၊ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုပါ အန်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် အရက်နာကျတာ သက်သာသွားမယ်။ အရက်နာကျလို့ ၀မ်းသွားတာ၊ အစားအသောက်ပျက်တာတွေကလည်း အစာအိမ်ထိခိုက်သွားတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့ ဘာလို့ အရက်နာကျလဲ ဆိုတာကို သိကြပြီပေါ့။
အရက်နာမကျအောင်ကာကွယ်နည်းတွေထဲမှာ “ကိုယ့်ကိုကိုက်ဖူးတဲ့ခွေးအမွေး” ကအစပါတယ်။.. ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။ အရက်က ခွေးရူးကိုက်ရင် ဒဏ်ရာမှာ ခွေးအမွေးအုံတယ်ဆိုတာကို ယူထားတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အရက်နာကျရင် အရက်နဲ့ဖြေရတယ်ဆိုတာကိုahair of the dog that bit you လို့အရင်က ခွေးရူးကိုက်တာကို တလွဲကုတာကို လှောင်ပြီးပြောတာပါ။ ပေါင်မုန့်မီးကင်နဲ့ ဘလက်ကော်ဖီသောက်တာ။ ဆိုလိုတာကတော့ အရက်ပြင်းတွေသောက်ပြီး အနောက်ကရေလိုက်ရောတာမျိုးပါပဲ။ အရည်တစ်ခုခုသောက်ကြပါတယ်။ ဘီယာတွေဘာတွေ ထပ်သောက်ကြတာတို့ ကော်ဖီသောက်တာတို့ကို chaser လုပ်တယ်ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဆုံးနိုင်အောင်များပြားတဲ့ ဆေးမြီးတိုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တကယ်ပဲ ထိရောက်မှု ရှိပါသလား ..။
လှေမျောရင်လှေနဲ့လိုက်၊ အရက်နာကျရင် အရက်နဲ့ကုအရက်နာကို အရက်နဲ့ဖြေလို့လူပြောများတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
အရက်နာကျလို့မသက်မသာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုက အသည်းမှာ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် အဆိပ်တွေများနေတာကို အသည်းက ဖယ်ထုတ်နေရလို့လည်းပါပါတယ်။ အရက်ထပ်သောက်လိုက်ရင် ဖြစ်နေတဲ့အရက်နာကျတဲ့လက္ခဏာတွေ သက်သာသွားသလို ခဏလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်က အသည်းကို ဒုက္ခပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အခုတောင် မနိုင်မနင်းသန့်စင်နေရာတာ အဆိပ်တွေထပ်ပို့ပေးသလိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါ ။ အရက်နာကျရင် အရက်နဲ့ကုဆိုတာ အထင်မှားတာပါ။ အသည်းကျွမ်းချင်ရင်သာ ထပ်သောက်ရတာပါ။
ပေါင်မုန့်အညိုပထမတော့ ပေါင်မုန့်ညိုကိုမီးကင်စားတာဟာသိပ္ပံနည်းကျတဲ့ ကုထုံးလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဖြစ်ရတာက တူးနေအောင်ဖုတ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်မှာ ပါတဲ့ကာဗွန်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေစစ်လို အသုံးဝင်ပါတယ်။ အမှန်က အဲဒီ ကာဗွန်ဆိုတာက carbon ကို ပြုပြင်ထားတဲ့ အက်တီဗေးတက် ကာဗွန်မှာပဲမှန်ပါတယ်။ အက်တီဗေးတက်ကာဗွန်တွေကို အဆိပ်ကုထုံးတွေမှာသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကာဗွန်ကို အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆိပ်သင့်မှုတွေမှာ မသုံးပါဘူး။ တကယ်က အရက်နာကျတာနဲ့ အရက်အဆိပ်သင့်တာနဲ့မတူသေးပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အဝေးကြီးရဲ့ အဝေးကြီးမှာ ထပ်ဝေးနေတဲ့ကုထုံးလို့ဆိုရပါမယ်။ ပိုဆိုးတာက ပေါင်မုန့်က ကာဗွန်က အက်တီးဗေးတက်မဟုတ်တာပါ။ ဇာတ်ကနာပါတယ်။ ဝေးသထက်ဝေးသွားပါပြီ။ ဆိုလိုတာက ပေါင်မုန့်နည်းကိုလည်း ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားခဲ့လိုက်လို့ရပါပြီ ဆိုတာပါပဲ။
ဘလက်ကော်ဖီဘလက်ကော်ဖီဟာ အရက်နာကျခြင်းအတွက် သိပ်ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြတဲ့သူများပါတယ်။ ကော်ဖီမှာ ကဖိန်းပါတဲ့အတွက် ပင်ပန်းပြီး ခြေမသယ်ချင်လက်မသယ်ချင် နွမ်းနယ်တာကိုသက်သာစေတဲ့အတွက်ဒီလိုယူဆပါတယ်။ ကဖိန်းအကြောင်း မကောင်းတာတွေ ရေးထားတာဖတ်ထားရင် အဲဒါဟာလွဲနေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကဖိန်းဓာတ် ထွက်နေတုန်းလေး သက်သာသလိုဖြစ်သွားတာပါ။ ကဖိန်းဓာတ်ပျက်ပြယ်သွားတဲ့အခါ အရင်က အရက်နာကျတာထက်ပိုတောင်ပင်ပန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကဖိန်းဓာတ်က သွေားကြောတွေရဲ့ ကျယ်ပြန့်နေမှုကို ပြန်ကျဉ်းစေတဲ့အတွက် ခေါင်းကို တူနဲ့ ထုနေသလို တဒိန်းဒိန်း ကိုက်ခဲနေတာကိုတော့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးတာကတော့ ကဖိန်းဟာ အပေါ့သွားဖို့လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ အရက်လည်း အဲဒီလိုလှုံ့ဆော်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အပေါ့သွားတာသိပ်များပြီး ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုပါဖြစ်လာပါတယ်။ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးရင် အရက်နာကျတာပိုဆိုးလာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကော်ဖီကလည်း ထင်သလောက် မဟုတ်တဲ့ ဆေးမြီးတို တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီကြော်နဲ့ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေဒါတွေကို အရက်နာကျမှ ထစားရင်တော့ ပိုတောင် ခံရခက်ပါဦးမယ်။ အရက်မသောက်ခင်စားရင်တော့ အစာအိမ်ကို အဆီနဲ့ကာထားသလိုဖြစ်စေပါတယ်။ အဆီဟာ ပျော်ဖို့ခက်တဲ့အတွက် အစာအိမ်ကိုအုပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး အရက်ကို အစာအိမ်ရဲ့စုပ်ယူမှုကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အရက်ဒဏ်ကို ကြာကြာခံရစေသလိုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေစွန့်ထုတ်မှုကိုလည်း ကြာရှည်စေတဲ့အတွက် နောက်တစ်နေ့မှာ သိပ်မခံရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သိပ်မခံရဘူးဆိုတာက ချက်ချင်းသိပ်မခံရပေမယ့် အကြာကြီးခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းပါပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီအယူဆကလည်း မြေထဲပင်လယ်ဒေသကလူတွေ အရက်သောက်ခါနီး သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်းသောက်တယ်ဆိုတဲ့ဓလေ့ကနေလာပုံရပါတယ်။ အရက်မသောက်ခင်၊ အသီးအနှံဖျော်ရည်တွေ၊သစ်သီးတွေစားပေးကြတာလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရက်နာကျတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ချို့ကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းဟာ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းအနေနဲ့တော့မှန်ကန်ပါတယ်။ အရက်နာမကျဖို့ပဲ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်တာပါ၊ ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြက်ဥကြက်ဥကတော့ နေရာတကာမှာပါတာပါပဲ။ အဆိပ်ဖြေလည်းပါ။၀ိတ်မလည်းပါ။ နေရာတကာမှာပါတယ်။ အရက်နာကျတဲ့မနက်မှာ ကြက်ဥသောက်ရင် စွမ်းအင်ပြန်ပြည့်ပါမယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားအစာနဲ့မတူတာက ကြက်ဥမှာ ပါတဲ့ ဆစ်တီအင်း (cystenine) ဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာ အသည်းမှာရှိတဲ့ အရက်နာကျမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်သင့်ဓာတ်တွေကို ဖြိုခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥကြောင့် ကြွင်းကျန်နေတဲ့ အဆိပ်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မြန်ဆန်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ။ ဒါကြောင့် ကြက်ဥကတော့ ကုထုံးအစစ်ထဲမှာ ပါဝင်သွားပါပြီ။
ငှက်ပျောသီးကို အရက်နာကျတဲ့မနက်မှာစားတဲ့အခါ အပေါ့သွားတာများလို့ပါသွားတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးအလွန်အကျွံသွားတာကိုလည်း သက်သာသွားစေပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်များတဲ့ ကီဝီသီးတွေ ၊ အားကစားသမားတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေကလည်း အလားတူ အကျိုးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငှက်ပျောသီးကို ကုထုံးထဲ ထည့်လို့ရပါတယ်။
ရေဆိုတော့ သိပ်တော့ အံ့သြစရာမရှိပါဘူး။ ရေ ဆိုတာ ဆေးတစ်ပါးပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ရေမသောက်ချင်လို့ အရက်သောက်ပါတယ်ဆိုမှ ရေများများပြန်သောက်ရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ရေက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ သန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာ ပါတဲ့အတွက် ရေက အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားဖို့နဲ့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာကိုကာကွယ်ဖို့တွေမှာ အကျိုးပြုပါတယ်။ ရေထဲကို သကြားနဲ့ဆားရောထည့်ပြီး သောက်တာကလည်း ညဘက်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ ဂလူကိုဂျင်တွေကိုပြန်ဖြည့် ပေးပါတယ်။ ကဖိန်းနဲ့ကာဗွန်မပါတဲ့ အာကစားသမားတွေသောက်ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ အချိုရည်တွေဟာ အလားတူ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရစေနိုင်ပါတယ်။ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ အရက်တစ်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ကြားမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက် သောက်သင့်ပါတယ်။ ရေသောက်တဲ့အတွက် အရက်သောက်ကို လျှော့ချလိုက်သလို ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ တစ်နာရီမှာ အရက် ၀.၇၅ အောင်စလောက်(0.022 လီတာလောက်)ကိုပဲ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်ပြီးတဲ့ညမှာ မအိပ်ခင် ရေများများ သောက်ပေးတာဟာ အယ်လ်ကိုဟောကို ခြေဖျက်ရလို့ သုံးလိုက်ရတဲ့ အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သစ်သီးဖျော်ရေတွေမှာ အချိုဓာတ်ပါဝင်ရင် ဖရက်တို့စ်ဆိုတဲ့ သစ်သီးမှာပါဝင်တဲ့သကြားဓာတ်ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီသကြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ ဖရက်တို့စ်သကြားဟာ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆိပ်ဖယ်ရှားမှုနှုန်းကို မြန်ဆန်တိုးတက်စေပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည်တွေဟာ အရက်နာကျနေတဲ့မနက်ခင်းတွေမှာသောက်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါ ။ ဗီတာမင်နဲ့ အဟာရများစွာပါဝင်တဲ့အတွက် အရက်ကြောင့်ဆီးအလွန်အကျွံသွားပြီး ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အာဟာရတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် စီနဲ့ ဘီပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကလည်း အလားတူ အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတစ်ချို့ဟာ အရက်နာကျတာကို တစ်ခြားဆေးဝါးတွေထက်ပိုပြီး ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Excedrin ဟာ ခေါင်းကိုက်သက်သာစေပါတယ်။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ acetaminophen ဟာ အကိုက်အခဲအတွက် သက်သာစေပြီး၊ ကဖိန်းကတော့ သွေးကြောတွေကျယ်လာတာကို လျှော့ချပေးနိုင်လို့ ခေါင်းကိုက်သက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ acetaminophen ကို ကြာရှည်တွဲပြီးသုံးစွဲရင် အသည်းပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသလို၊ ကဖိန်းကြောင့်လည်း ဆီးပိုပြီး အလွန်အကျွံသွားစေနိုင်ပါတယ်။
အက်စ်ပရင်ကတော့ ကဖိန်းမပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေပါတယ်။ အက်စ်ပရင်မှာပါဝင်တယ် ပရောစ်တယ်ဂလင်ဒင်န်(prostaglandin) ဟာ အရက်နာကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကလည်း အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီး အိပ်ရာမ၀င်မီ အက်စ်ပရင်သောက်ရင် အရက်နာကျတာကိုသက်သာစေသလို၊ခေါင်းကိုက်တာ အစာအိမအထက်ပိုင်းမှာ မအီမသာဖြစ်တာမျိုးကိုသက်သာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် အစာအိမ်မကောင်းတဲ့သူတွေမှာတော့ အက်စ်ပရင်သောက်တဲ့အတွက် အစာအိမ်နာတာကပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
ချုံပြီးပြောရရင်တော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့တော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဟာ အရက်နာကျတာကို ကာကွယ်နိုင်သလို ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ အချိန်ပါပဲ။ ဘာဆေးဝါးတွေ၊ ဘယ်လိုဖြည့်စွက်အစာတွေစားစား အရက်နာကျတာကို လုံးဝပျောက်ဖို့ဆိုတာ အချိန်လိုပါတယ်။ အရက်မှာပါတဲ့အဆိပ်တွေကို ချက်ခြင်းကင်းစင်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တော်ညီညွတ်မျှတတဲ့အစာတွေဖြည့်စွက်စားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အရက်နာကျတာမြန်မြန်သက်သာပြီး ကိုယ်တွင်းမှာကြွင်းကျန်တဲ့အဆိပ်တွေ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ခနာကိုယ်ဟာ အရက်မှာပါတဲ့အဆိပ်တွေကို သန့်စင်စစ်ထုတ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့စက်တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက် အရက်ကို စနစ်တကျသောက်ဖို့နဲ့ အလွန်အကျွံမသောက်မိအောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့သောက်မိပြီဆိုရင်လည်း အသက်သာဆုံးဖြင့်အောင်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ အမြန်ဆုံးသက်သာအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
အရက်နာမကျဖို့ အသေချာဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အရက်မသောက်ဘဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ကို မသောက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သောက်ရင်လည်း အလွန်အကျွံမသောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ခနာကိုယ်ဟာ အရက်သောက်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ စက်တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက် အရက်သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း စနစ်တကျ အစာနဲ့ တွဲပြီးသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်အရတော့ အရက်နာကျခြင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံးသက်သာအောင် လိုက်နာသင့်တာတွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
· အရက်မသောက်မီမှာ အစာကို အ၀စားထားပါ။ အစာရှိနေရင် အရက်ကြောင့် အစာအိမ်နာတာကိုလျော့စေပါတယ်။ အဲဒီအတွကအော့အန်တာလည်းနည်းစေပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောကို အစာအိမ်က စုပ်ယူနှုန်းကိုလည်းနည်းစေပါတယ်။
· ရေတစ်ခွက်သောက်ပါ။အရက်ကြောင့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းထားဖို့လိုပါတယ်။
· ဗီတာမင်ဆေးတွေသောက်ပါ။အားဆေးတွေဟာ အရက်သောက်ပြီး ဆီးသွားရင်းပါသွားမယ့် ဗီတာမင်တွေအတွက် ကြိုတင်ဖြည့်တင်းထားဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
· အရက်ကို အတိုင်းအတာနဲ့သောက်ပါ။ တစ်နာရီကို ဘယ်နှခါသောက်မလဲဆိုတာကိုလည်းသတ်မှတ်ပါ။ အရက်တငုံလောက်သောက်လိုက်ရင် ခနာကိုယ်က တစ်နာရီကြာအောင်သန့်စင်ရတဲ့အတွက် ဆက်တိုက်သောက်နေမယ်ဆိုရင် အရက်နာကျဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
· ရေသောက်ပါ။ အရက်သောက်နေတုန်းလည်းရေသောက်ပေးပါ။ အဲဒါဆို အရက်ရဲ့ပြင်းအားကိုလျော့စေတဲ့အတွက် အစာအိမ်ကို သက်သာစေသလို၊ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ ရေသောက်တဲ့အတွက် အရက်ကို သိပ်များများမသောက်ဖြစ်အောင် ထိန်းပြီးသားလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။
· ဘာသောက်မလဲရွေးချယ်ပါ။ အရက်အသစ်တစ်မျိုးမျိုးသောက်ရင် ခနာကိုယ်က သန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရပုံမတူပါဘူး။ ပိုမူးတတ်ပါတယ်။ မျိုးနွယ်မတူတာတွေရောသောက်ရင်ပိုပြီး အရက်နာကျနိုင်ပါတယ်။ ဘီယာတွေကတော့ အယ်လ်ကိုဟော အနည်းဆုံးတွေပါပဲ။ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ကာဗွန်ထည့်ထားတဲ့အတွက် အစာအိမ်က အယ်လ်ကိုဟောစုပ်ယူမှုကို မြန်ဆန်စေပြီး ကိုယ်တွင်းမှာ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် အဆိပ်သင့်မှုကို ဖြစ်စေတာပါပဲ။ ၀ိုင်တွေကတော့ ဘီယာထက် အယ်လ်ကိုဟောများပါတယ်။ (၇ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတတ်ပါတယ်။) ၀ိုင်ဖြူကအရက်နာမကျဖို့ ပိုသေချာပါတယ်။ ၀ိုင်တွေမှာ ကာဗွန်မဖြည့်ထားတဲ့အတွက် အစာအိမ်က အယ်လ်ကိုဟော စုပ်ယူတာနှေးပါတယ်။ ဈေးပေါတဲ့ဝိုင်တွေမှာ ကွန်ဂျင်နာ(congener) ပါဝင်နှုန်းပိုမြင့်ပါတယ်။ ကွန်ဂျင်နာဆိုတာကတော့ အရက်ရဲ့ အရောင်နဲ့အနံ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းပါပဲ။ အရက်ချက်တဲ့အခါ ကွန်ဂျင်နာထွက်လာပါတယ်။ ၀ိုင်ဖြူမှာဆိုရင် အရောင်အနံ့နည်းတဲ့အတွက် ကွန်ဂျင်နာပါဝင်မှုလည်းနည်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၀ိုင်ဖြူက ၀ိုင်နီလောက် အရက်နာမကျစေတာပါ။ အရက်တွေမှာတော့ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုက (၄၀ ကနေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိအထိရှိနိုင်ပါတယ်။) အရက်တွေမှာလည်း အရောင်မပါတဲ့အရက်တွေဟာ အရောင်ပါတာတွေလောက် အရက်နာမကျပါဘူး။အဲဒါကလည်း ကွန်ဂျင်နာကြောင့်ပါပဲ။ ဈေးပေါတာတွေက ပိုပြီး ကွန်ဂျင်နာပါဝင်မှုမြင့်တဲ့အတွက် ပိုပြီးအရက်နာကျနိုင်ပါတယ်။
အက်စပရင်နှစ်လုံးသောက်ပါ။ အရက်နာကျတာကို သက်သာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသောက်တဲ့အခါ ရေတစ်ဖန်ခွက် အပြည့်သောက်ပါ။ ရေဓာတ်ပိုမိုရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
· အရက်သောက်ပြီးနောက်နေ့မနက်မှာ အက်စ်ပရင်နောက်ထပ်နှစ်လုံးသောက်ပါ။ ရေအ၀သောက်ပါ။
· မနက်စာ၀၀စားပါ။ ကော်ဖီနဲ့ ကဖိန်းပါဝင်တာတွေမသောက်ပါနဲ့။
ဒီလို စနစ်တကျကြိုတင်ကာကွယ်မယ်၊ ဖြည့်စွက်စားသင့်တာတွေလည်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ အရက်နာကျတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကိုဥာဏ်စောင့်ဆိုတဲ့စကားပုံလေးအတိုင်း မသောက်မဖြစ်သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အရက်နာမကျအောင်နဲ့ခနာကိုယ်မှာ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် ဒဏ်မဖြစ်ရအောင် အထက်ပါနည်းနာတွေကို လိုက်နာပြီးသောက်ကြဖို့အကြံပြုပါတယ်။
မောပန်းနွမ်းနယ် အားအင်ကုန်ခမ်းမှုကို ပြန်လည် အားပြည့်လာစေမည့် နည်း ၆ နည်း
0 comments at 11:18 PM
ညနေ သုံးနာရီလောက်ပဲရှိဥိးမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘက်ထရီချာဂျင် ကျနေလာပြီဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလို ခံစားလာရပြီ။ ခြေလက်တွေ မသယ်ချင်တော့ဘူး။ အလုပ်တွေက လေးနာရီခွဲ ငါးနာရီ ဆို ပြီးပြီ ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာက အဲဒီမှာ ပြီးမှာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက် ဒီလို ဖြစ်နေလို့ မဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး အများစုဟာ အိမ်ထောင်ရှင် ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရှင် အလျောက် ကလေးကြိုရမယ်။ မိဘတွေကို ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ပေးရမယ်။ အိမ်အလုပ်တွေရှိတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်ချမ်းဖို့ရှိတယ်။ ညစာပြင်ဆင်ရမယ်။ ခွေးကလေး ကြောင်ကလေးတွေရှိရင် အစာကျွေးရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိလည်း ကလေး အလုပ်ကလွဲရင် တခြားအလုပ်တွေတော့ လုပ်ရဦးမှာပါပဲ။ အနည်းဆုံး ကိုယ့်တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက လူမှုရေးတွေပါ လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါ။ ခု ပြောနေတဲ့ လုပ်စရာ စရင်းကို ဖတ်ရင်ကိုပဲ တော်တော်မောနေလောက်ပြီ။ ဒါ အသေးစိပ်တွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒီတော့ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ညနေ သုံးနာရီလောက်မှာ ချာဂျင်ကျပြီး အားအင် ကုန်ခမ်း မောပမ်းနွမ်းနယ် လာတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာ သိမှ ဖြစ်ပါတော့မယ်။
ဒိမှာ အားအင်ကုန်ခမ်း နွမ်းနယ်လာမှုကို တိုက်ဖျက်ပေးမယ့် နည်း ၆ နည်းရှိပါတယ်။ တချို့နည်းက လေးနာရီလောက်မှာစမယ့် အစည်းအဝေးအတွက် ချက်ချင်း အားအင်ပြန်ရစေမှာမျိုး ဖြစ်ပြီး တချို့ နည်းတွေကတော့ ရေရှည် ကျင့်ကြံရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာက စိတ်ရှည်ဖို့ပါ။ ဒီနည်း တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လန်းဆန်းစွာ ပြန်လည် ပွင့်ဖူးလာတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်လို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပထမနည်း . စွမ်းအင်ဖြည့်ပေးမယ့် အစားအစာ
စွမ်းအင် ဖြည့်ပေးမယ့် အစားအစာ ဆိုလို့ ချောကလက်ဘား တွေ၊ အချိုတွေလို့ မြင်လိုက်မိသလား။ သကြားဓာတ်ဟာ ချက်ချင်းပြန်ပြီး လန်းဆန်းစေတယ် ဆိုပေမယ့် တစ်နာရီအတွင်း ပြန်ပြီး အားပြန်လျော့ စေနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူပြီး တာရှည်လည်း ခံမယ့် စွမ်းအင်ကို ရရှိနိုင်မယ့် အစားအစာကတော့ ပရိုတင်း ဓာတ်နဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်မယ့် သားရေစာတွေပါပဲ။
ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ဓာတ်ပေါင်း ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုက ဂျုံနဲ့ချည်း ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်ပါ။ ဆိုလိုတာက ကြက်ဥတွေ၊ နို့တွေ၊ သကြားတွေ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ ပေါင်မုန့်မျိုး မဟုတ်တာပါ။ အဲလို ဂျုံချည်းသက်သက် နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မုန့်နဲ့ အဆီထုတ်ထားတဲ့ ထောပတ် တွဲစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မြေပဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့ peanut butter ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါအတွဲအဖက်ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကတော့ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ် ဓာတ်ပေါင်းစုနဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် တွဲဖက်ထားတာပါပဲ။ ဒါက အစာကို ချေဖျက်ရာမှာ ရိုးရိုး ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ကို ချေဖျက်တာထက် ပိုပြီး နှေးကွေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်သွေးထဲက ဂလူးကို့စ် ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီလို စားလိုက်တာက အချိုတစ်ခုခုကို စားပစ်လိုက်တာထက်ပိုပြီး အကျိုးရှိပြီး တာရှည်ခံပါတယ်။
ဒုတိယနည်း . ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်နဲ့အမျှင်ဓာတ် မြင့်မားတဲ့ မနက်စာ
ရေတို-ရေရှည် စွမ်းအင်ပြည့်နေစေဖို့အတွက် မနက်တိုင်း ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်နဲ့အမျှင်ဓာတ် မြင့်မားတဲ့ အစားအစာကို မနက်စာအဖြစ် စားသုံးတာကို အကျင့်လုပ်ပေးပါ။ ဒီလို စားသုံးတာဟာ ဘယ်လို အကျိုး သက်ရောက်မှု ရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာသူတွေက တင်ပြထားပါတယ်။ သူတို့က ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ မနက်စာနဲ့ မကြွယ်ဝတဲ့ မနက်စာ နှစ်မျိုးကို ယှဉ်ပြပါတယ်။ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မနက်စာ ( အမျှင်ဓာတ် နည်းတာရောများတာရော) နဲ့ အဆီများတဲ့ မနက်စာယှဉ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ် ဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ မနက်စာက မနက်စာနဲ့နေ့လည်စာကြား အချိန်တစ်ချိန်လုံးမှာ အလန်းဆန်းဆုံး ဖြစ်နိုင်စေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အစပြုတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ် ပြည့်ဝဖို့ ဆိုရင် ဂျုံကြမ်းချည်း သက်သက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မုန့်၊ သို့မဟုတ် အမျှင်ဓာတ်အများကြီးပါတဲ့ cereal တွေလိုအပ်ပါတယ်။ cereal ( ကွေကာ) ခွက်တစ်ဝက်ဟာ အမျှင် ၁၄ ဂရမ်လောက် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျှင်အများကြီ ပါဝင်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေဆို တစ်ချပ်မှာ အမျှင်ဓာတ် ၆ ဂရမ်လောက်ပါတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကို ၂၅ ဂရမ်ကနေ ၃၀ ဂရမ်လောက် ဝင်အောင် စားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တတိယနည်း . နားချိန်ယူပါ
တစ်နေ့တစ်နေ့ လုပ်စရာတွေ ဗာဟီရတွေက သိပ်များပါတယ်။ ဒါတွေကို မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်ဖို့ကလည်း မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ပဲ အနားယူလိုက်တာကလည်း အဲဒီ မောပမ်းနွမ်းနယ်နေမှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်စေပြီး ပိုမိုအလုပ်တွင်စေပါတယ်။ ငါးမိနစ်ကနေ ဆယ်မိနစ် လောက်ထိ အနားယူလိုက်တာဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ရုတ်တရက် ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အလေ့အထလေး တစ်ခု ထားလိုက်တာက ရေရှည်အတွက် ကောင်းပြီး မောပမ်းနွမ်းနယ် အားအင်ကုန်ခမ်းမှုကို မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အလုပ်ကို တစ်နာရီလုပ်ပြီး စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက်နားတာ၊ နှစ်နာရီလောက် ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီးရင် ၁၄မိနစ်လောက် နားတာမျိုးတွေကို လုပ်ပေးတာဟာ အလုပ်ကို ပိုမို တွင်ကျယ် စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စတုတ္ထနည်း . ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု
စွမ်းအင်တွေ အလွယ်တကူပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်သိပ်များတဲ့ နေ့စဉ်ကိစ္စတွေထဲက ဆယ်မိနစ်လောက် ယူပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရုံးက ကော်ရစ်ဒါ စင်္ကြံမှာလည်း လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာဟာ စွမ်းအင်ဖြည့်ပေးခြင်း တစ်မျိုးပါပဲလို့ လေ့လာသူ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ၁၀မိနစ်လောက်လေး လျှောက်လိုက်ရုံနဲ့ကို သင့်ရဲ့ မောပမ်း နွမ်းနယ်အားအင် ကုန်ခမ်းနေသလို ခံစားရမှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
၁၀မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်လိုက်တာဟာ သိပ်မောပမ်းနွမ်းနယ်နေလို့ အချိုတစ်ခုခုစားလိုက်တာထက် ပိုပြီး အကျိုးရှိ၊ အာနိသင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို လမ်းလျှောက်လိုက်တာဟာ နောက်ထပ် နှစ်နာရီလောက် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အားအင်တွေ ပြန်ပြည့်လာနိုင်စေပါတယ်။ အချိုစားလိုက်တာက ရုတ်တရက်တော့ လန်းလာသလို ဖြစ်ပေမယ့် တစ်နာရီလောက်ကြာရင် နဂိုမူလအခြေအနေထက် ပိုဆိုးလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပဉ္စမနည်း . ငါးမိနစ်လောက် တရားမှတ်ပါ
မြောက်များလှစွာတော့ လေ့လာချက်တွေရဲ့ တွေ့ရှိမှုအရ တရားထိုင်ခြင်းက မောပမ်းနွမ်းနယ် အားအင် ကုန်ခမ်းမှုကို တိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင်တွေ ဘာတွေလည်း ထွန်းထားစရာမလိုပါဘူး။ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်ပြီး မှတ်ရုံပါပဲ။ ခဏတဖြုတ် မှတ်နိုင်ရုံနဲ့တင် သိပ်အကျိုးရှိတာ ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သုံးမိနစ်လောက် စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီး တရားမှတ်လိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ ပြေးလွှား လှုပ်ရှားနေတဲ့ မတည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်တွေကို လျှော့ချပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင့် အားအင်ကို သင် ထိန်းချုပ် လိုက်နိုင်ပြီး ပြန်လည် လန်းဆန်းမှုကိုရစေပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို မိနစ်ပိုင်းလောက် တရားမှတ်ခြင်းနဲ့ စတင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကို အတော်လေး ကောင်းနေပါပြီ။ မနက်အိပ်ယာက မထခင် မိနစ်အနည်းငယ်ကနေစပြီး တစ်နေကုန် အနားယူလိုက်တိုင်း သုံးမိနစ်ကနေ ငါးမိနစ်လောက်စီ ၊ အိမ်က တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ သို့မဟုတ်ရုံးက ကိုယ့်အခန်းလေးထဲမှာ ကိုယ် တရားမှတ်မယ် ဆိုရင် သင့်အတွက် အရမ်းအကျိုးရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။
မျက်စိကို အသာမှိတ်လိုက်ပါ။ အသက်ကို အနည်းငယ် ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြေလျှော့ချလိုက်ပြီး အတွေးတွေဝင်လာရင်လည်း အဲဒါတွေကို ကောင်းကင်ကတိမ်တွေလို့ သဘောထားပြီး သူ့ဟာသူ လွင့်နေပါစေ။ ကောင်းမွန်တဲ့ အာရုံကိုပဲရယူပါ။ ဥပမာ နေဝင်ချိန်အလှတို့၊ သာယာလွန်းတဲ့ ရှုခင်းတို့ ကမ်းခြေတို့ …။
ဆဌမနည်း . ဘယ်သူတွေက ကိုယ့်စွမ်းအင်တွေကို ယုတ်လျော့စေလဲ လေ့လာပါ
ရေရှည်မှာ သင့်စွမ်းအင်တွေကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက်က ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ လူတွေနဲ့ပဲ ထိတွေ့ ဆက်ဆံဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းလည်း ဒီလိုချည်းနေဖို့ ဘယ်အခွင့်ရပါ့မလဲ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာက ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူ မပြေတဲ့သူဆိုတာက အမြဲရှိနေတတ်တာ မဟုတ်လား။ အနည်းဆုံးတော့ စိတ်တို ဒေါသထွက်နေတတ်တဲ့ အလုပ်ရှင်ကအစ၊ ကိုယ်ကို စိတ်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ ဘတ်စ်ကားစပယ်ယာအလယ်၊ အချိုးမပြေတဲ့ စူပါမားကက်က ငွေရှင်းသူအဆုံး၊ အမျိုးမျိုး ကြုံရမှာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက အဲဒီလို ကိုယ့်ကို စိတ်ဒုက္ခပေးနိုင်သူတွေကပဲ သင့်ဆီက စွမ်းအင်တွေကို ကျသွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာပါ။ တချို့လူတွေက သင့်ကို သိပ်ပြီး စိတ်ဖိစီးစေတာကိုလည်း သင်သိမှာပါပဲ။ သူတို့ဟာ သင့်ဆီက စွမ်းအင်တွေကို စုတ်ယူပစ်လိုက်တဲ့ စွမ်းအင်စုတ်ဖုတ်ကောင်တွေပဲပေါ့။ သူတို့ စုတ်ယူသွားတဲ့အတွက် သူတို့နဲ့လည်း ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးရော သင်ခွေလဲကျသွားတော့တာပဲ မဟုတ်လား။
ဒီတော့ ဘယ်လိုလူတွေက သင့်ကို စိတ်ဒုက္ခရောက်စေပြီး ဘယ်လိုလူတွေက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပေးနေတယ် ဆိုတာ သိအောင် အရင်ဆန်းစစ်ပါ။ သူတို့နဲ့ ခဏလေးတွေ့လိုက်ရုံနဲ့ စွမ်းအင်တွေ အောက်ဆုံးထိ ထိုးကျသွားတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင် သေချာပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်စွမ်းအင်တွေကို စုတ်ယူနေတဲ့ ဖုတ်ကောင် တွေပါပဲ။ ဘယ်သူဟာ ဘယ်လို ဆိုတာ သိပြီဆိုမှတော့ ကိုယ့်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်ရင် နေရထိုင်ရ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲ။ အတတ်နိုင်ဆုံးလည်း ဒီလူတွေကို ရှောင်ဖို့ပဲကြိုးစားပါ။ မလွှဲသာလို့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။
Labels: fatigue fighter
1 comments at 4:53 AM
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေလို ရှည်ရှည်သွယ်သွယ် ကလေးတွေမို့ အနောက်နိုင်ငံက လူတွေက Ladies’ finger လို့ ခေါ်တဲ့ ရုံးပတီသီးလေးတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာတော့ သိပ်ကို လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ဈေးသက်သက်သာသာ ရနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တစ်မျိုးပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ဟာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ဝမ်းချုပ်တဲ့ ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရပြီး လတ်တလောမှာတော့ အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်ပြီး လေချဉ်တွေတက်တက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နှစ်ရှည်လများ ခံစားခဲ့ရပြီး ဘာနဲ့မှ မသက်သာခဲ့တာမို့ အလွယ်တကူ ပျောက်လိမ့်မယ်လို့လည်း ထင်မထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းစွာပဲ ရုံးပတီသီးကြောင့် သူ့ရောဂါတွေ ပျောက်ခဲ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကစပြီး ရုံးပတီသီး မှန်မှန်စားလိုက်တာ.. ဘာဆေးမှ မမှီဝဲရတော့ပါဘူးတဲ့။ ဝမ်းချုပ်တာ၊ အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်ပြီး လေချဉ်တွေ တက်နေတာ ပျောက်သွားတဲ့အပြင် သွေးထဲက သကြားဓာတ်တွေလည်း ၁၃၅ ကနေ ၉၈ ထိ ကျဆင်း သွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုလက်စထရော လယ်ဗယ်ကိုလည်း ထိန်းထားနိုင်လာပါတယ်။
လေ့လာသုတေသနပြုချက်တွေအရ ရုံးပတီသိးဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အစုအပေါင်း တစ်ခုပါပဲတဲ့။ တစ်ဝက်လောက်က ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်တွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်တွေက ကိုလက်စထရောကိုကျစေပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်ဖို့ကိုလည်း နည်းပါးစေပါတယ်။ ကျန်တစ်ဝက်ကတော့ မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူတို့က အူသိမ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့အပြင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့ကျစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာ မဖြစ်ဖို့ တားဆီးပေးပါတယ်။
ချက်ထားတဲ့ ရုံးပတီသီး ပန်းကန်တစ်ဝက်လောက်မှာ folic acid နဲ့ ဗီတာမင် B6 တွေက လိုအပ်တယ်လို့ ညွှန်းဆိုထားတဲ့ ပမာဏရဲ့ ၁၀% ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးပတီသီးဟာ ဗီတာမင် B6, folic acid နဲ့ အမျှင် ဓာတ်တွေ သိပ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးများ
Dietary Fiber2gm
Carbohydrate 5.8 gm
Vitamin A 460IU
Folic acid 36.5 microgram
Iron filtered 0.4 mg
ဒါတွေက ဂဏန်းသတ်မှတ်ချက် တန်ဖိုးတွေသက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းညွှန်ချက် အဖြစ်ပဲ သုံးပါ။ အကယ်၍ သင်က တကယ်လိုအပ်နေပြီး ဆေးပညာအရလည်း ကန့်သတ်နေထိုင် စားသုံးနေရတယ် ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ စားသုံးပါ။
ရုံးပတီသီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ..
+ ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျှင်တွေက သွေးထဲက သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သူက အူကနေ သကြားဓာတ် စုတ်ယူမှုကို ထိန်းထားပေးနိုင်တာမို့ပါ။
+ ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အချွဲတွေက ကိုလက်စထရောကိုတင် တားဆီးပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိပ်တွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ အက်စစ်တစ်မျိုးကိုလည်း အသည်းကနေ အမြောက်အများ စစ်ထုတ်နိုင်ဖို့ လည်းအားပေးပါတယ်။
+ တော်တော်များများသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေက ရောဂါတော်တော်များများဟာ အူကနေ စဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ရုံးပတီသီးရဲ့ အမျှင်ဓာတ်က ဝမ်းချုပ်တာကို တားဆီးပေးတယ်။ အမျှင်အများစုက ဝမ်းချုပ်တာကို တားဆီးပေးတတ်ပေမယ့် ရုံးပတီသီးမှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကတော့ အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ အူကို အလုပ်လုပ်တာ ပုံမမှန်စေတဲ့၊ ထိခိုက်စေတတ်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဂျုံကြမ်းတွေလို မဟုတ်ပဲ ရုံးပတီသီးရဲ့ အမျှင်ဓာတ်က အူကို သက်သာမှု ပေးစေနိုင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများကတော့ ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အချွဲဓာတ်က အညစ်အကြေးကို ကောင်းမွန်စွာ စွန့်ပစ်စေဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့အတွက် သိပ်ပြီး မနှစ်သက်ချင်ကြပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရုံးပတီသီးဟာ တော်တော်များများသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ပြေလည်စေတဲ့ သက်သာစေတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဟင်းသီး တစ်မျိုး ဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ သွေးထဲက ကိုလက်စထရောနဲ့ အဆိပ်တွေကို လျော့ကျ စေရုံမက သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုလည်း ပုံမှန်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အင်မတန် ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အပြင် (အများကြီး အလွန်အကျွံ စားသူတွေကလွဲရင်) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ အဆိပ်အတောက် လုံးဝကင်းစင်ပြီး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ဟင်းသီး တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့အပြင် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ လူတိုင်းလည်း စားသုံးနိုင်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
+ရုံးပတီသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တွေနဲ့ အာဟာရ တန်ဖိုးတွေ လျော့ကျမသွားဖို့အတွက်က သူ့ကို တတ်နိုင်သမျှ အချိန်အနည်းဆုံးချက်ပြုရပါမယ်။ အစိမ်းစားတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် ရေနွေးလေး ဖျောလိုက်တာ၊ ခဏလောက် ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းလိုက်တာမျိုးတွေ လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။